လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် အချက်များ - For her Myanmar
ကိုယ့်ကို အလုပ်ခွင်အတွင်း အနိုင်ကျင့်ညှဉ်းပန်းမှုတွေ ပေါ်လာရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းသင့်လဲ?
ခုလတ်တလော လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖိအားပေးတာ၊ ချိုးနှိမ်တာတွေ လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့တာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းဆဲမှုတွေဟာ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကြီးလဲဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြနေခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။
ဆိုပေမဲ့လို့ အနိုင်ကျင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုလို့ ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပဲ မြင်ကြတာတွေ များပါတယ်။ ဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အနိုင်ကျင့် ညှဉ်းပန်းမှုလို့ ဆိုလိုက်ရင် ရုတ်တရက် ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာတွေကို workplace bullying လို့ ခေါ်နိုင်သလဲဆိုရင်…
Related Article >>> ဘယ်အကျင့်ဆိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုမရအောင် ဆွဲချနေတာလဲ?
(၁)ရင့်သီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို နာမည်အဖြစ် တပ်ခေါ် ပြောဆိုခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းဆဲခြင်း (name calling) ဥပမာ- ဟို အခြောက်ကောင် … လို့ ခေါ်တာမျိုး
(၂) အစုအဝေးဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေ ကနေ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖယ်ကြဉ်ထားခြင်း
(၃) တစ်ဖက်သူကို သိမ်ငယ်အောင် လှောင်ပြောင်ခြင်း/အရှက်ခွဲခြင်း/ဟာသပြုလုပ်ခြင်း
(၄) အပြစ်မရှိသော်လည်း မကြာခဏ အပြစ်လွှဲချခံရခြင်း
(၅)လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေးခြင်း
(၆) တစ်ဖက်လူ စိတ်ဓာတ်ကျသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မဖြစ်နိုင်သောတာဝန်များကို တမင်ပေးအပ်ခြင်း
(၇) ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရန် ကောလဟာလသတင်းများ လိုက်ဖြန့်ခြင်း
(၈) ကာယအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ တိုက်ခိုက်ခြင်း တို့ကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ တွေ့ရင် bullyလုပ်တယ်၊ harass လုပ်တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ အရှက်ခွဲတာတွေ အင်မတန်ပေါများလာတဲ့ခေတ်မို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း anti-harassment policyနဲ့ non-discriminatory policy ကို ထိထိမိမိ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
Related Article >>> လုပ်ငန်းခွင်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့သူတွေ ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အရာ (၅)ခု
HR သမားတွေအနေနဲ့ anti-harassment/ anti-bullying policy (လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကင်းဝေးရေး ပေါ်လစီ) ချမှတ်တဲ့အခါ အဓိကအနေနဲ့
(၁) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လူတစ်ဦးရဲ့ ဘာသာ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ အသားအရောင်၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရမှု/ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုကို လုံးဝသည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အချက် (zero tolerance policy)
(၂) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နှောင့်ယှက်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းတစ်စုံတစ်ရာကို အပြည့်အဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့်အချက်
(၃) နှောင့်ယှက်အနိုင်ကျင့်ခံတဲ့အခါ ခံရသူအနေနဲ့ တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
(၄) နှောင့်ယှက်အနိုင်ကျင့်ခံရမှုကို မည်သို့ မည်ပုံအရေးယူမည့် စည်းကမ်းဥပဒေများ
(၅) နှောင့်ယှက်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကြောင့် တိုင်ကြားသူကို တစ်ဖက်မှ လက်တုံ့ မပြန်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးမှု
စတဲ့ ၅ချက်ကို မပါမဖြစ် ထည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဟာ အားလုံးကို ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ခေါင်းဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မူဝါဒတွေဟာ စာရွက်ထဲမှာသာ ရှိပြီး လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လျစ်လျူရှုတတ်တဲ့ စရိုက်ရှိခြင်း စတာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ခေါင်းဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အနိုင်ကျင့် ၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း နဲ့ ကြုံတွေလာတဲ့အခါ ခံရသူ victim အနေနဲ့ တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၃)ခုရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက Forced labour ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း( ILO) ကို တိုင်ကြားတာပါ။
Forced labour ဆိုတာ ILO ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ မိမိ ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင် က ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကဖြစ်စေ၊ စစ်တပ်ကဖြစ်စေ Forced labour လုပ်လာရင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၁ ၅၆၆ ၅၃၈၊ ၅၆၆ ၅၃၉၊ ၅၇၈ ၉၂၅၊ ၅၇၉၉၅၆ကနေ တစ်ဆင့် ILO ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိကို ဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ အမှတ် ၂၇၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိူးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးကို သွားရောက်တိုင်ကြားတာပါပဲ။
တတိယတစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းဥပဒေလမ်းကြောင်းကနေ သွားခြင်းပါ။
Mental abuse (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခြင်း)ဟာ ကျောင်းနဲ့ စာသင်ခန်းမှာပဲ တွေ့ရတဲ့ အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တမ်းတွေအရ အရွယ်ရောက်သူ ၁၀ယောက်မှာ ၆ယောက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံစားနေရပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ privacy ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ bullyလုပ်မှု တွေဟာ စာသင်ခန်းနဲ့ ကျောင်းတွေမှာ တွေ့ကြုံရတာထက်တောင် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ တချို့ကတော့ အလုပ်ထွက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေမဲ့ တချို့မခံနိုင်လွန်းသူတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာသွားကြပါတယ်။
ဆိုတော့… workplace Mental abuse ကြုံရတဲ့အခါ အရှုံးမပေးဘဲ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကနေ သွားပြီး တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တကယ်လည်း လုပ်သင့်တယ်လေနော်… လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကလည်း မတရားမှုကို ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ပြီး တရားမျှတမှုကို ဝန်းရံပေးခြင်းအားဖြင့် ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားကို တဖြည်းဖြည်း ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Reference links: ilo.org autoenrolment.co.uk entrepreneur.com
ကိုယျ့ကို အလုပျခှငျအတှငျး အနိုငျကငျြ့ညှဉျးပနျးမှုတှေ ပျေါလာရငျ ဘယျလို ဖွရှေငျးသငျ့လဲ?
ခုလတျတလော လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ လူတဈယောကျကို သူ့ရဲ့ လိငျစိတျခံယူမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖိအားပေးတာ၊ ခြိုးနှိမျတာတှေ လုပျခဲ့တာကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသသှေားခဲ့တာ အားလုံးသိကွမှာပါ။ ဒါဟာ လုပျငနျးခှငျအတှငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ညှဉျးဆဲမှုတှဟော ဘယျလောကျ အန်တရာယျကွီးလဲဆိုတာကို မီးမောငျးထိုးပွနခေဲ့တဲ့ ဖွဈရပျတဈခုပါပဲ။
ဆိုပမေဲ့လို့ အနိုငျကငျြ့ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျမှုလို့ ပွောလိုကျရငျ တျောတျောမြားမြားက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြ့မှုတှကေိုပဲ မွငျကွတာတှေ မြားပါတယျ။ ဆိုတော့ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ အနိုငျကငျြ့ ညှဉျးပနျးမှုလို့ ဆိုလိုကျရငျ ရုတျတရကျ ဘာမှနျးမသိ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ဘယျလိုဟာတှကေို workplace bullying လို့ ချေါနိုငျသလဲဆိုရငျ…
Related Article >>> ဘယျအကငျြ့ဆိုးတှကေ လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျမှုမရအောငျ ဆှဲခနြတောလဲ?
(၁)ရငျ့သီးတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှကေို နာမညျအဖွဈ တပျချေါ ပွောဆိုခွငျးဖွငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ညှဉျးဆဲခွငျး (name calling) ဥပမာ- ဟို အခွောကျကောငျ … လို့ ချေါတာမြိုး
(၂) အစုအဝေးဆောငျရှကျမှုတှေ၊ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးတှေ ကနေ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ဖယျကွဉျထားခွငျး
(၃) တဈဖကျသူကို သိမျငယျအောငျ လှောငျပွောငျခွငျး/အရှကျခှဲခွငျး/ဟာသပွုလုပျခွငျး
(၄) အပွဈမရှိသျောလညျး မကွာခဏ အပွဈလှဲခခြံရခွငျး
(၅)လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ တာဝနျမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး ခွိမျးခွောကျဖိအားပေးခွငျး
(၆) တဈဖကျလူ စိတျဓာတျကသြှားဖို့ ရညျရှယျပွီး မဖွဈနိုငျသောတာဝနျမြားကို တမငျပေးအပျခွငျး
(၇) ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးစရေနျ ကောလဟာလသတငျးမြား လိုကျဖွနျ့ခွငျး
(၈) ကာယအားဖွငျ့ ဖွဈစေ၊ နှုတျအားဖွငျ့ ဖွဈစေ တိုကျခိုကျခွငျး တို့ကို လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ တှရေ့ငျ bullyလုပျတယျ၊ harass လုပျတယျလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဒီဘကျနှဈပိုငျးတှမှော လူတဈယောကျရဲ့ လိငျစိတျခံယူမှုကွောငျ့ ခှဲခွားဆကျဆံတာ၊ အရှကျခှဲတာတှေ အငျမတနျပေါမြားလာတဲ့ခတျေမို့ လုပျငနျးခှငျအတှငျး anti-harassment policyနဲ့ non-discriminatory policy ကို ထိထိမိမိ ခမြှတျအကောငျအထညျဖျောဖို့ အရေးကွီးလာပါတယျ။
Related Article >>> လုပျငနျးခှငျမှာ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားတဲ့သူတှေ ကငျြ့သုံးလုပျဆောငျတတျတဲ့အရာ (၅)ခု
HR သမားတှအေနနေဲ့ anti-harassment/ anti-bullying policy (လုပျငနျးခှငျအတှငျး ညှဉျးပနျးနှိပျစကျမှု ကငျးဝေးရေး ပျေါလစီ) ခမြှတျတဲ့အခါ အဓိကအနနေဲ့
(၁) လုပျငနျးခှငျအတှငျး လူတဈဦးရဲ့ ဘာသာ၊ လိငျစိတျခံယူမှု၊ အသားအရောငျ၊ လူမြိုး၊ အသကျအရှယျ၊ မသနျစှမျးမှု၊ ကိုယျခန်ဓာနဲ့ ပတျသကျပွီး အနိုငျကငျြ့ခံရမှု/ ခှဲခွားဆကျဆံခံရမှုကို လုံးဝသညျးခံမညျမဟုတျကွောငျး ဖျောပွထားသညျ့အခကျြ (zero tolerance policy)
(၂) လုပျငနျးခှငျအတှငျး နှောငျ့ယှကျအနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးတဈစုံတဈရာကို အပွညျ့အဝ ဆနျ့ကငျြကွောငျး ထုတျပွနျသညျ့အခကျြ
(၃) နှောငျ့ယှကျအနိုငျကငျြ့ခံတဲ့အခါ ခံရသူအနနေဲ့ တိုငျကွားနိုငျတဲ့ နညျးလမျးမြား
(၄) နှောငျ့ယှကျအနိုငျကငျြ့ခံရမှုကို မညျသို့ မညျပုံအရေးယူမညျ့ စညျးကမျးဥပဒမြေား
(၅) နှောငျ့ယှကျအနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးကွောငျ့ တိုငျကွားသူကို တဈဖကျမှ လကျတုံ့ မပွနျနိုငျအောငျ ကာကှယျပေးမှု
စတဲ့ ၅ခကျြကို မပါမဖွဈ ထညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျအတှငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြ့ခံရခွငျးဟာ အားလုံးကို ခွုံကွညျ့ရမယျဆိုရငျတော့ လုပျငနျးရှငျဘကျက ခေါငျးဆောငျမှု ညံ့ဖငျြးခွငျး၊ မူဝါဒတှဟော စာရှကျထဲမှာသာ ရှိပွီး လကျတှမှေ့ာ အကောငျအထညျဖျောရနျ ပကျြကှကျခွငျး၊ လဈြလြူရှုတတျတဲ့ စရိုကျရှိခွငျး စတာတှကွေောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ခေါငျးဆောငျမှု ညံ့ဖငျြးတဲ့ လုပျငနျးခှငျမှာ အနိုငျကငျြ့ ၊ ခွိမျးခွောကျခံရခွငျး နဲ့ ကွုံတှလောတဲ့အခါ ခံရသူ victim အနနေဲ့ တိုငျကွားနိုငျတဲ့ နညျးလမျး ၃ခုရှိပါတယျ။
ပထမတဈခုက Forced labour ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကနေ နိုငျငံတကာအလုပျသမားအဖှဲ့အစညျး( ILO) ကို တိုငျကွားတာပါ။
Forced labour ဆိုတာ ILO ရဲ့ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြအရ မိမိ ရဲ့ စိတျဆန်ဒကို ဆနျ့ကငျြပွီး တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ဖိအားပေး ခွိမျးခွောကျမှုကွောငျ့ လုပျရတဲ့ အလုပျလို့ ဆိုပါတယျ။ မွို့ပွအုပျခြုပျရေး အာဏာပိုငျ က ဖွဈစေ၊ ပုဂ်ဂလိကကုမ်ပဏီကဖွဈစေ၊ စဈတပျကဖွဈစေ Forced labour လုပျလာရငျ ဖုနျးနံပါတျ ၀၁ ၅၆၆ ၅၃၈၊ ၅၆၆ ၅၃၉၊ ၅၇၈ ၉၂၅၊ ၅၇၉၉၅၆ကနေ တဈဆငျ့ ILO ရဲ့ ဆကျသှယျရေးအရာရှိကို ဆကျသှယျပွီး တိုငျကွားနိုငျပါတယျ။
ဒုတိယတဈခုကတော့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရခွငျးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကနေ အမှတျ ၂၇၊ ပွညျလမျး၊ လှိုငျမွို့နယျမှာရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ အမြိူးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျရုံးကို သှားရောကျတိုငျကွားတာပါပဲ။
တတိယတဈခုကတော့ ပွညျတှငျးဥပဒလေမျးကွောငျးကနေ သှားခွငျးပါ။
Mental abuse (စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြ့ခွငျး)ဟာ ကြောငျးနဲ့ စာသငျခနျးမှာပဲ တှရေ့တဲ့ အရာတဈခုမဟုတျပါဘူး။ စဈတမျးတှအေရ အရှယျရောကျသူ ၁၀ယောကျမှာ ၆ယောကျ လုပျငနျးခှငျအတှငျး အနိုငျကငျြ့မှုကို ခံစားနရေပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှေ၊ privacy ခြိုးဖောကျမှုတှေ၊ bullyလုပျမှု တှဟော စာသငျခနျးနဲ့ ကြောငျးတှမှော တှကွေုံ့ရတာထကျတောငျ ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။ တခြို့ကတော့ အလုပျထှကျတဲ့နညျးနဲ့ ဖွရှေငျးပမေဲ့ တခြို့မခံနိုငျလှနျးသူတှကေတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသတေဲ့နညျးနဲ့ ထှကျပေါကျရှာသှားကွပါတယျ။
ဆိုတော့… workplace Mental abuse ကွုံရတဲ့အခါ အရှုံးမပေးဘဲ အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ တရားဥပဒလေမျးကွောငျးကနေ သှားပွီး တရားမြှတမှုကို ရှာဖှဖေို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ တကယျလညျး လုပျသငျ့တယျလနေျော… လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးကလညျး မတရားမှုကို ဝိုငျးဝနျးဆနျ့ကငျြပွီး တရားမြှတမှုကို ဝနျးရံပေးခွငျးအားဖွငျ့ ဖိနှိပျသူလူတနျးစားကို တဖွညျးဖွညျး ပပြောကျအောငျ လုပျဆောငျလာနိုငျလိမျ့လို့ ယုံကွညျမိပါတယျ။
Tags: Bully, Bullying, Career, law, solve, Workplace
ကြည့်နေကျ ဇာတ်အိမ်တွေနဲ့ လုံးဝကွဲထွက်ပြီး ကြည့်ရကျိုးနပ်စေမယ့် "Ustad Hotel"